Khatarta Information waa khatarta ugu badan ee cilmi bulsho, waxa uu kordhay, waana halis ugu adag in la fahmo.
The tartan labaad anshaxa da'da bulshada cilmi digital halis macluumaad, ka iman kara ee waxyeello ka siidaynta macluumaadka (Council 2014) . waxyeellooyinka Macluumaadka ka siidaynta macluumaadka shakhsiga ah ayaa laga yaabaa in dhaqaale (tusaale ahaan, shaqo laga badiyay), bulshada (tusaale ahaan, ceeb), cilmi nafsiga (tusaale ahaan, niyad-jabka), ama xataa dembiyada (tusaale ahaan, xiro dhaqanka sharci darro). Nasiib darro, da'da digital kordhiyaa halista macluumaad u xuub-waxaa jira oo kaliya si aad macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dhaqanka. Oo, halista macluumaad ayaa xaqiijiyay mid aad u adag in la fahmo oo la maareeyo marka la barbar dhigo halista jiray oo walaac cilmi bulsho da'da analog, sida halista jirka. Si aad u aragto sida da'da digital kordhiyaa halista macluumaad, ka fiirsada guurka ka warqad diiwaanka caafimaadka electronic. Labada nooc oo diiwaanka la abuuro khatar, laakiin diiwaanka electronic abuuro halista badan, sababtoo ah ee baaxadda weyn ay gudbin karo xisbiga ah aan la ogalayn ama ku biireen diiwaanada kale. cilmi Bulshada ee da'da digital horay u ordaan dhibaato halis macluumaad galay, in qayb ka, maxaa yeelay, iyagu ma ay si buuxda u fahmaan sida ay u tiradeeda iyo u maareeyaan. Sidaas daraaddeed, waxaan doonayaa inaan bixiyaan hab waxtar leh in aad ka fikirto halis macluumaad, ka dibna waxaan doonayaa inaan idin siiyo qaar ka mid ah talo sida loo maareeyo khatarta macluumaad ee cilmi-baarista iyo in la sii daayo macluumaadka cilmi kale.
Tusaale A cad ee failure ee "anonymization" ka timaadaa 1990 ee Massachusetts (Sweeney 2002) . Guddiga Caymiska The Group (GIC) ahaa hay'ad dawladeed ka masuul ah iibsiga caymiska caafimaadka ee dhammaan shaqaalaha dawladda. Iyadoo shaqadan, GIC soo ururiyay diiwaanka caafimaadka faahfaahsan oo ku saabsan kumanaan shaqaalaha dawladda. In dadaal lagu doonayo in Xoola cilmi ah oo ku saabsan hababka lagu kobciyo caafimaadka, GIC go'aansaday inuu sii daayo diiwaanka si aad cilmi. Si kastaba ha ahaatee, iyagu ma ay wadaagaan oo dhan ay xog; halkii, ay "qarsoodiya" waa iyadoo la fogeynayo macluumaadka sida magaca iyo cinwaanka. Si kastaba ha ahaatee, waxay macluumaad kale oo iyana waxay u maleeyeen laga yaabaa inuu waxtar u leh cilmi sida xogta dadka (zip code, taariikhda dhalashada, jinsiyadda, iyo jinsiga) iyo macluumaadka caafimaadka (booqashada xogta, cudurka, hab) (Jaantuska 6.4) ka tagay (Ohm 2010) . Nasiib darro, tani "anonymization" ma ahaa ku filan si ay u ilaaliyaan macluumaadka.
Jaantuska 6.4: "Anonymization" waa hab ka mid ah ay ka saareen cad aqoonsashada macluumaadka. Tusaale ahaan, marka la sii daayo diiwaanka caymiska caafimaadka ee shaqaalaha dawladda Guddiga Massachusetts Group Insurance (GIC) Magaca iyo cinwaanka ka files ka saaro. Waxaan isticmaali xigashooyin agagaarka "anonymization" erayga sababtoo ah geeddi-socodka ku bixisaa muuqaalka kore ee magaciisa, laakiin aan magaciisa dhabta ah.
Si aad u muujiso ayaa haddana ceebaha GIC "anonymization" ah, Latanya Sweeney-markaas arday ka qalin at MIT-bixiyo $ 20 si ay u bartaan diiwaanka codbixinta magaalada of Cambridge, magaaladiisa taliyaha Massachusetts William Weld ka ah. Kuwani diiwaanka codeynta ka mid ah macluumaadka sida magaca, cinwaanka, zip code, taariikhda dhalashada, iyo jinsiga. Xaqiiqada ah in faylka caafimaadka xogta iyo xeerka file cod-wadaago beeraha-zip, taariikhda dhalashada, iyo galmada-loogu tala galay in Sweeney lala xidhiidhin karo. Sweeney ogaaday in dhalashadii Weld ee ahayd July 31, 1945, iyo diiwaanka codbixinta waxaa ka mid ahaa dadka lix kaliya in Cambridge la xusuustay dhalashadii in. Dheeraad ah, ka mid ah kuwa lix qof, saddex kaliya ahaayeen lab. Oo, kuwa saddex nin, mid keliya la wadaago Weld ee zip code. Sidaas darteed, macluumaadka codbixinta tusay in qof kasta in xogta caafimaad ee la Weld ee isku dhafan ee taariikhda dhalashada, jinsiga, iyo zip code ahaa William Weld. In jiritaan, kuwaas oo saddex xabbadood oo macluumaadka faraha gaar ah oo isaga ugu xogta. Isticmaalka xaqiiqda, Sweeney ahaa awoodaan in ay helaan xogta caafimaadka Weld ee, iyo inay isaga u sheegtaa iyada feat, iyana waxay isagii u soo diri nuqul ka mid ah diiwaanka uu (Ohm 2010) .
Jaantuska 6.5: Dib-u-idenification xogta "qarsoodiya". Latanya Sweeney isku daro ah "oo qarsoodiya" diiwaanka caafimaadka diiwaanka codbixinta si loo helo dinwaanka caafimaadka Guddoomiyaha William Weld (Sweeney 2002) .
Shaqada Sweeney ayaa muujineysa qaab dhismeedka aasaasiga ah ee weerarada de-anonymization oyna la qaato muddo ka bulshada ammaanka computer ah. In weeraradan, laba nooc data, oo innaba kuwaas oo keligeed ayaa shaaca ka qaaday warbixin xasaasi ah, ay ku xiran, iyo iyada oo ku xirid this, warbixin xasaasi ah la kulmin. In siyaabo qaar ka mid ah geeddi-socodka this ay la mid tahay jidka in la dubayo soda iyo khal, laba walxaha kuwa naftooda by ammaan, waxaa lagu dari karaa si loo soo saaro natiijo xun.
In jawaabta si uu shuqulka Sweeney ayaa, iyo shaqada kale ee la xiriira, hadda cilmi-guud ka saar ka badan macluumaad-oo dhan si loo yaqaan "Shaqsi Aqoonsiga Information" (PII) (Narayanan and Shmatikov 2010) hadda -during habka of "anonymization." Dheeraad ah, cilmi badan ay ogaadaan in qaar xog-sida diiwaanka caafimaadka, xogta dhaqaale, jawaabaha tilmaamaan su'aalo ku saabsan sharci-darro ah u badan tahay in dabeecad-waa mid aad u xasaasi u sii daayo xataa ka dib "anonymization." si kastaba ha ahaatee, tusaalooyin dheeraad ah oo dhawaan aan ku tilmaami doonaa hoose ayaa sheegaya in cilmi bulsho u baahan tahay inaad bedesho sida ay u fakirayaan. Sida talaabadii ugu horeysay, waa caqliga leh in loo qaato in xogta oo dhan waa laga yaabo inay la aqoonsan karo oo xogta oo dhan waa laga yaabo xasaasi ah. In si kale loo dhigo, halkii ay ka fekereyso halista in macluumaadka khuseysaa hoosaad yar oo mashaariicda, waa in aynu ka fikirno in ay khuseysaa-in qaar ka mid ah degree-to dhammaan mashaariicda.
Labada dhinacyo of this dib-u-jeedka waxaa lagu muujiyey by Prize Netflix ah. Sida lagu qeexay cutubka 5, Netflix sii daayay 100 million ratings movie bixisay ku dhawaad ​​500,000 oo xubnood, oo waxay lahaayeen call furan meesha dadka adduunka oo dhan ka soo gudbiyey algorithms in hagaajin karo awoodda Netflix ay ku talinaynaa filimada. Ka hor inta sii daayo xogta, Netflix saaro wixii macluumaad cad shakhsi-aqoonsado, sida magacyada. Netflix sidoo kale tegey talaabo dheeraad ah iyo soo bandhigay perturbations yar in qaar ka mid ah diiwaanka (tusaale ahaan, la beddelo ratings qaar ka 4 xiddiguhuna inay 3 xiddigaha). Netflix ugu dhaqsaha badan helay, si kastaba ha ahaatee, in inkastoo ay dadaalkooda, data waxay ahaayeen by jirin loola jeedaa si qarsoodi ah.
Just laba todobaad ka dib xogta la sii daayay Narayanan and Shmatikov (2008) waxay muujisay in ay suurto gal ahayd in ay bartaan oo ku saabsan dad gaar ah ayaa la door movie. trick The in ay weerar dib-u-aqoonsiga ahayd la mid ah Sweeney ee: wada ku milmaan labada ilo macluumaad, mid macluumaad laga yaabo xasaasi ah oo aan macluumaad cad aqoonsiga iyo mid ay ku jirto aqoonsiga dadka. Mid kasta oo ka mid ah ilaha xogta laga yaabaa in si gaar ah amaan, laakiin marka ay weheliso dataset soo biiray wuxuu abuuri karaa halista macluumaad. In the case of data Netflix ah, halkan sida ay u dhici karto. Ka soo qaad in aan doorto in fikirradayda ku saabsan ficil iyo filimada majaajilada la co-workers my wadaagaan, laakiin aan door bidaan in aan la wadaagno fekerkeyga ku aadan movies diimeed iyo siyaasadeed. My co-workers isticmaali kartaa macluumaadka in aan la wadaago iyaga la si aad u hesho xogta ku data Netflix ah; macluumaadka aan wadaagno ayaa laga yaabaa inuu faraha gaar ah sida taariikhda William Weld dhalashada, zip code, iyo galmada. Markaas, haddii ay heli aan faraha gaarka ah ee xogta, waxay baran karin, ratings ku saabsan oo dhan movies, oo ay ku jiraan filimada meesha aan doorato in aadan la wadaagin. Waxa intaa dheer in noocan oo kale ah weerar lala beegsaday diiradda saaray hal qof, Narayanan and Shmatikov (2008) sidoo kale muujisay in ay suurto gal ahayd in la sameeyo -one weerar ballaadhan ku lug leh dad-by biirtay xogta Netflix la data rating shakhsiyeed iyo movie in qaar ka mid ah qof ayaa doortay inuu post on Database Movie internetka (IMDb). Macluumaad kasta in uu yahay faraha gaar u ah qofka-xitaa gaar ah ay set of movie ratings-karo waxaa loo isticmaali si ay u aqoonsadaan.
Inkasta oo xogta Netflix dib ayaa loo aqoonsan karo in labada weerar lala beegsaday ama ballaadhan, waxaa weli ka muuqan laga yaabo in ay halis yar. Ka dib oo dhan, ratings movie muuqdaan ma aad u xasaasi ah. Inkasta oo laga yaabo in ay run guud ahaan, waayo qaar ka mid ah 500,000 qof oo ku nool dataset ah, ratings movie laga yaabaa in arrin xasaasi ah. Dhab ahaantii, ay jawaab u ah-anonymization de naag closeted lesbian biiray joog class-tallaabo ka dhan ah Netflix. Halkan sida dhibaatada waxaa lagu muujiyay in ay dacwad (Singel 2009) :
"[M] ovie iyo rating xogta ku qoran warar ku dabiiciga ah oo dheeraad ah sare u gaarka ah iyo xasaasi [ingula]. data movie xubin The shaaca ka qaaday xiisaha shakhsi xubin Netflix ah iyo / ama halganka arrimaha kala duwan heer sare ah shakhsi, oo ay ku jiraan galmo, cudurada dhimirka, ka soo kabsanaya Khamriga, iyo cabsigelinta ka incest, xadgudub jireed, rabshada guriga, sino, iyo kufsi. "
The de-anonymization oo ka mid ah xogta Netflix Prize muujinayaa labadaba in xogta oo dhan waa laga yaabo inay la garan karo iyo in xogta oo dhan waa laga yaabo xasaasi ah. Halkaa marka ay marayso, aad u malaynayso in laga yaabo in tani khuseysaa oo keliya in ay xogta in sheeganayso in ay noqon oo ku saabsan dadka. Waxa la yaab leh, in aanay ahayn kiiska. Iyada oo laga jawaabayo Freedom ah codsi Law Information, Dowladda City New York sii daayay diiwaanada kortaan kasta taxi magaalada New York sanadkii 2013, oo ay ku jiraan laga qaadayo iyo hoos u off jeer, goobaha, iyo xaddiga lacagta (xusa ka Cutubka 2aad in Farber (2015) loo isticmaalo xogta this si ay u tijaabiso aragtiyaha muhiim ah in dhaqaalaha iyo shaqada). Inkasta oo xogta ku saabsan safarada taxi u muuqdaan kuwo laga yaabo benign maxaa yeelay waxa ay u muuqdaan kuwo uusan u noqon macluumaad ku saabsan dadka, Anthony Tockar ogaaday in dataset taxi this dhab ku jira macluumaad badan oo laga yaabo xasaasi ah oo ku saabsan dadka. Si aad u muujiso, wuxuu arkay oo dhan safarada laga bilaabo The Hustler Club-ka kooxda strip weyn ee New York-u dhexeeya saqda dhexe iyo 6am ka dibna laga helay goobaha ay dhibic-off. Search Tani shaaca ka qaaday-in nuxurka-a liiska cinwaanada dadka qaar inta Club Hustler The (Tockar 2014) . Way adag tahay in la qiyaaso in dowladda magaaladuna wuxuu lahaa taas maanka marka la sii daayay xogta. Dhab ahaantii, farsamo this isku loo isticmaali karaa si aad u hesho cinwaanada guriga dadka booqo meel kasta oo magaalada ah rugta caafimaadka, dhismaha dawlad, ama hay'ad diini ah.
Labadan xaaladood ee Prize Netflix iyo City New York taxi xog-show in dad xirfad leh xad ku fashilantay in ay si sax ah u qiyaaso khatarta macluumaad in xogta si ay u sii daayay, oo kiisaska waa kuwan by jirin loola jeedaa gaar ah (Barbaro and Zeller Jr 2006; Zimmer 2010; Narayanan, Huey, and Felten 2016) . Dheeraad ah, in badan oo ka mid ah xaaladaha, waxa ay, xogta dhibaato weli waa la heli karaa si xor ah online, taasoo muujinaysa dhib ee abid beddeshey sii daayo macluumaadka a. Wadajir waa tusaale-iyo sidoo kale cilmi sayniska computer ku saabsan asturnaanta-raadad garawsannay muhiim ah. Cilmi waa in loo qaato in xogta oo dhan waa laga yaabo inay la aqoonsan karo oo xogta oo dhan waa laga yaabo xasaasi ah.
Nasiib darro, ma jiraan wax xal fudud xaqiiqada ah in xogta oo dhan waa laga yaabo inay la aqoonsan karo oo xogta oo dhan waa laga yaabo xasaasi ah. Si kastaba ha ahaatee, hal hab si loo yareeyo khatarta warbixin inta aad la xogta ka shaqeeya waa in la abuuro iyo raacdo qorshaha ilaalinta xogta a. Qorshahan waxaa hoos u doonaa fursad ah in xogta aad daadato doonaa, oo hoos doonaa waxyeello haddii dillaac ah bartey dhacdaa. The gaarka ah ee qorshaha ilaalinta xogta, sida uu foomkani ee sirta ah in la isticmaalo, beddeli doonaa muddo, laakiin Services Data UK helpfully abaabusha eegidoonaan qaybaha qorshaha ilaalinta xogta ah oo wuxuu galay 5 qaybood oo ay ugu yeedhaan 5 kitfo: mashaariicda ammaan ah, dadka ammaan , goobaha nabdoon, xogta ammaan ah, iyo wax soo saarka ammaan (Shaxda 6.2) (Desai, Ritchie, and Welpton 2016) . Midkoodna shan kitfo gaar ah siiyaan ilaalinta kaamil ah. Laakiin, way wada sameeyaan go'an awood arrimood in ay yarayn karto halista macluumaad.
Shaxda 6.2: The 5 kitfo yihiin mabaadiida qorshaynta iyo fulinta qorshe ilaalinta xogta (Desai, Ritchie, and Welpton 2016) .
mashaariicda Safe xaddidaya mashaariicda la data in kuwa anshaxa
dadka Safe helitaanka la xadiday in dadka la aamini karo oo leh macluumaadka (tusaale ahaan, dadka soo maray tababarka anshaxa)
data Safe Xogta waxaa de-aqoonsaday iyo darka ilaa intii suurtagal ah
goobaha Safe xogta lagu kaydiyaa kombiyuutarada haboon jireed (tusaale ahaan, qol xiran) iyo software (tusaale, ilaalinta password, lo) ilaalinta
saarka Safe saarka cilmi dib loo eego si looga hortago in si qalad ah jajaban gaarka ah
Waxa intaa dheer in ilaalinta xogta aad inta aad isticmaalkiisa, hal talaabo ee geedi socodka cilmi meesha khatarta macluumaad gaar ah socodyada waa xogta qaybsiga leh cilmi kale. qaybsiga Data dhexdooda saynisyahano waa qiimaha muhiimka ah ee dadaalka ugu sayniska, iyo waxay si aad ah xarumaha horumarinta aqoonta. Halkan sida House UK ee Commons tilmaamay muhiimada wadaaga xogta:
"Helitaanka xogta aasaasiga ah waa haddii cilmi-yihiin in ay soo saari, iyo in la dhiso xaqiijiyo natiijooyinka in lagu soo waramayaa in suugaanta. xaqna waa in uu ahaadaa in, haddii ay jirto sabab adag oo si kale, xogta waa in si buuxda shaaca iyo sameeyey si cad u heli karo. Iyadoo la this mabda, halkaas oo ay suurtagal tahay, xogta la xidhiidha oo dhan cilmi dawladdu maalgaliso waa in la sameeyaa si balaadhan oo si xor ah laga heli karo. " (Molloy 2011)
Weliba, by xogta aad la cilmibaadhe kale la wadaago, waxaad laga yaabaa in la sii kordhaya khatarta macluumaad in ka qaybgalayaashu aad. Sidaas darteed, waxay u ekaan kartaa in cilmi raba inay wadaagaan xog-ama waxaa looga baahan yahay in ay wadaagaan xogta-soo food xiisad aasaasi ah. Dhinaca keliya bay leeyihiin waajib ku ah anshaxa si ay ula wadaagaan xogta ay la saynisyahano kale, gaar ahaan haddii cilmi asalka waa dawladdu maalgaliso. Weliba, waqti isku mid ah, cilmi waxa waajib ku ah anshaxa si loo yareeyo, sida ugu badan ee suurtagal ah, khatarta warbixin ka qaybgalayaasha ay ku.
Nasiib wanaag, u diraynaa ma aha sida aad u daran sida ay u muuqato. Waxaa muhiim ah in aad ka fikirto xogta wadaaga weheliyaan taxanaha ah ka lahayn wadaaga xogta in ay sii daayaan oo ay sharciga illoobaan, halkaas oo xogta waa "qarsoodiya" iyo posted qof kasta si ay u helaan (Jaantuska 6.6). Labada ka mid ah jagooyinka xad-dhaaf ah leeyihiin khatarta iyo faa'iidada. Taasi waa, ma aha si toos ah wax ugu anshaxa in aan la wadaagno xogta; sida hab tiraa faa'iidooyin badan ka iman kara bulshada. Ku soo noqoshada dhadhamiya, Xiriirka, iyo Time, tusaale hore ee cutubka wada hadleen, doodaha ka dhanka ah in la sii daayo macluumaadka in diirada saartaa waxyeellooyinka ay suurtagal tahay iyo in iska indha faa'iidooyinka ay suurto gal tahay dhigin mid hal dhinac, Waxaan ku tilmaami doonaa dhibaatooyinka la this hal dhinac ah, hab aad u ilaaliya si faahfaahsan hoos markii aan bixiyaan talo ku saabsan go'aan qaadashada in wejiga la hubin (Qaybta 6.6.4).
Jaantuska 6.6: xeeladaha sii daayo Data dhici kartaa sii socodka ah. Halka aad waa in ay la socdaan sii this ku xiran tahay faahfaahinta gaarka ah ee xogtaada. Xaaladdan oo kale, dib u eegis xisbiga saddexaad caawin kara in aad go'aan ka dheelitirka ku haboon ee halista iyo lacagta ah ee dacwaddaada.
Dheeraad ah, ee u dhexeeya labadan xaaladaha khatarta ah waa waxa aan ugu yeedhay doonaa hab deyr leh beerta, halkaas oo xogta la wadaagno dadka buuxiya shuruudaha qaarkood iyo kuwa raacsan in lagu xidho by xeerarka gaar ah (tusaale ahaan, kormeer ka IRB ah oo ah qorshaha ilaalinta xogta) . Habkan beerta deyran ku bixisaa badan oo faa'iidooyinka sii daayo iyo illoobin khatar yar. Dabcan, hab beerta deyran ku abuuraa su'aalo-kii badan waa in ay helaan, hoos jira xaalad waxa, sida dheer, kuwaas oo ay tahay in aad bixiso si ay u ilaaliyaan oo booliska beerta deyran iwm-laakiin kuwanu ma laga gudbi karin. Dhab ahaantii, waxaa jira horeba uga shaqaynayay Jannooyin deyr meel in cilmi hadda isticmaali kartaa, sida archive xogta oo ka mid ah Consortium Inter-jaamacad for Siyaasadda iyo Social Research at the University of Michigan.
Sidaas daraaddeed, halkaas oo xogta aad ka hesho waxbarasho waa in on taxanaha ah ee la wadaago ma jiro, beer deyr leh, iyo sii daayo oo illoobin? Waxa ay ku xiran tahay faahfaahinta xogta; cilmi waa dheelli Ixtiraamka Dadka, Raxmaan, Caddaaladda, iyo Ixtiraamka Law iyo Public Interest. Marka la qiimaynayo dheelitirka haboon go'aamada kale ee cilmi doondoonaysaan talo iyo ansixinta IRBs, iyo in la sii daayo macluumaadka kaliya qayb kale oo hanaanka in ay noqon kartaa. In si kale loo dhigo, inkastoo dadka qaar ay ka fekeraan in la sii daayo macluumaadka sida a uduween anshaxa rajo la'aan, aynu hore u haysanay nidaamka meel si ay u caawiyaan dheelli cilmi uhda dareemada noocaas ah anshaxa.
Mid ka mid ah habka final in aad ka fikirto wadaaga xogta waa isu ekaysiinta. Sannad kasta baabuurta ayaa ka mas'uul ah kumanaan dhimasho ah, laakiin ma isku dayaan in ay la mamnuuco wadida. Dhab ahaantii, call sida in la mamnuuco driving a noqon lahaa aan macquul ahayn, sababtoo ah driving awood waxyaalo badan oo cajiib ah. Saas ma aha, bulshada meelaha xayiraad on kuwaas oo baabuur wadi karto (tusaale ahaan, waxay u baahan yihiin in ay da 'gaar ah, waxay u baahan yihiin in ay ku maray baaritaano gaar ah) iyo sida ay u eryi karaa (tusaale ahaan, ka yar xadka xawaaraha). Society sidoo kale waxa uu dadka loo xilsaaray fulinta xeerarka (tusaale ahaan, booliska), oo waxaan ciqaabi dadka lagu qabto iyaga oo ku xadgudbay. Caynkanu wax la mid ah fikirka miisaaman in bulshada khuseysaa nidaaminaya wadista ayaa sidoo kale lagu saleyn karaa wadaagga xogta. Taasi waa, halkii samaynta dood absolutist waayo ama la wadaago macluumaadka, waxaan u malaynayaa in faa'iidada ugu weyn ka haysataa sidii aynu dheeraad ah si ammaan ah wadaagi karaan macluumaadka dheeraad ah ku soo noqon doonaa.
Si gabagabeeyo, halista macluumaad ayaa u kordhay, oo waxaa aad u adag in la saadaaliyo iyo tiradeeda. Sidaa darteed, waxaa ugu wanaagsan in loo qaato in xogta oo dhan waa laga yaabo inay la aqoonsan karo oo laga yaabo xasaasi ah. Si aad hoos u dhigidda halista macluumaad halka qabanayaan cilmi-baarista, cilmi abuuri karaan oo raac qorshaha ilaalinta xogta a. Dheeraad ah, halis macluumaad kama celinayo cilmi ka xog la saynisyahano kale la wadaago.